disable ascending ringtone - MYSTERY ZILLION
disable ascending ringtone
July 2011 edited July 2011 in Android
ကျွန်တော်တို့ Huawei ဖုန်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ Android တော်တော်များများမှာ ascending ringtone or cresendo ringtone ကို default ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Setting ​ပြောင်းလို့လည်းမရပါဘူး။ ringtone ခပ်မိုက်မိုက်လေးတွေ သုံးထားရင်လည်း ကိုယ်လိုတဲ့နေရာက စမကြားရဘဲ အလယ်လောက်ရောက်မှ ကျယ်လာတတ်တာပေါ့။ မကြာခဏ missed call ဖြစ်ရတာလည်း မနည်းလှပါဘူး။ အခုနည်းလမ်းက hack လုပ်ထားတဲ့ phone.apk ကို မူရင်း phone.apk မှာ overwrite လုပ်တဲ့နည်းပါ။ တရုတ် ဖိုရမ်တစ်ခုက ရတာပါ။
ဒီအတွက် မိမိဖုန်းဟာ root လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။ huawei ရဲ့ built-in file manager နဲ့ မရပါ။ root assess နဲ့ write privilege ​ပေးနိုင်တဲ့ file manager တစ်ခုသုံးရပါမယ်။
SD card ထဲမှာ download လုပ်ထားတဲ့ phone.apk ကိုသိမ်းပါ
ပြီးရင် /system/app ကိုသွားပါ။
phone.apk နဲ့ phone.odex နှစ်ခုကို SD card ထဲမှာ Folder အသစ်တစ်ခုယူပြီး backup လုပ်ပါ။
backup လုပ်ပြီးရင် ၎င်း file နှစ်ခုကို ဖျက်ပစ်ပါ။ ဖျက်ပစ်ပြီးတစ်ပြိုင်နက် phone.apk အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ message တက်လာပါမယ်။ ဖုန်းကို battery ဖြုတ်ပြီး power off လိုက်ပါ။
battery ပြန်တပ်ပြီး power on ပါ။
SD card ထဲက phone.apk အသစ်ကို /system/app/ ထဲကိုကူးထည့်ပါ။ ဖုန်းကို restart ပြန်ချပါ။
ကျွန်တော့် huawei c8500 မှာ လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။ အခြားဖုန်းများမှာ အာမမခံနိုင်ပါ။
Use at your own risk ။
But I cannot delete those2files by using the File managers I have...
( I tried with "Root manager", "Astro File Manager", but... both can't be done )
so... can u plz tell me what File Manager u were using and from where I can download...
again... Thank u...
Use "Root explorer". Your phone must be rooted to grant super user permission. Download "Root explorer" via following link.
Install it. Then explore system with it. You'll seea"R/W" button up the window. Press it to change it to "R/O". Then you can delete system files.
Yeah!!! got it fixed... Thank u so much bro...
I've been trying for that online for the last3nights and finally I got it from you...
I was using the same "Root explorer" but didn't notice about that "R/W" to "R/O"...
Plz, let me share about that for the people who are also willing to get the constant Ringtone on Android... I will mention your name and your link too...
backup လုပ်ပြီးရင် ၎င်း file နှစ်ခုကို ဖျက်ပစ်ပါ။ ဖျက်ပစ်ပြီးတစ်ပြိုင်နက် phone.apk အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ message တက်လာပါမယ်။ ဖုန်းကို battery ဖြုတ်ပြီး power off လိုက်ပါ။ Please explain exactly i cannot understanding ...